Amaqembu ePSL nawo akhalisana nesizwe sikaZulu ngokukhothama kweSilo - Impempe
Amaqembu ePSL nawo akhalisana nesizwe sikaZulu ngokukhothama kweSilo
March 12, 2021 Impempe.com
Amaqembu ehlukene adlala ezigabeni ezikhokhelayo kuleli ngaphansi kwePremier Soccer League asebhonge emswaneni ngokukhothama kweNkosi yamaZulu, uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu ngoLwesihlanu ekuseni.
UBhejane Phum’esqiwini ukhothame entathakusa yangoLwesihlanu ngemuva kokudunguzela isikhashana, ngokusho kwesitatimende esikhishwe nguNdunankulu kaZulu, uMntwana wakwaPhindangene, uMangosuthu Buthelezi.
Ukukhothama kweSilo kushaqise abaningi kanti imilayezo yokuzwelana nesizwe samaZulu neNdlunkulu kaZulu ingena ingenile kanti namaqembu ePSL okukhona kuwo iKaizer Chiefs neMamelodi Sundowns, Orlando Pirates namanye amaningi asedlulise amazwi enduduzo.
IPSL nayo ikhiphe isitatimende yathi kuzoba nomzuzu wokuthula ukuhlonipha iSilo ngaphambi kwemidlalo yale nhlangano kusukela khona ngoLwesihlanu.
“IPSL iyalila ngokukhothama kweSilo saMabandla… Sidlulisa amazwi enduduzo asuka ekujuleni kwezinhliziyo eNdlunkulu, isizwe samaZulu nabantu baseNingizimu Afrika yonkana,” besifundeka kanje isitatimende sePSL.
IJomo Cosmos yona ithe: “Umndeni weJomo Cosmos ufisa ukwedlulisa amazwi enduduzo asuka ekujuleni kwezinhliziyo emndenini weNkosi uZwelithini. Uphumule ngokuthula Silo saMabandla.”
IChiefs nayo ibhonge emswaneni, ithi: “Sibambisana nesizwe sonke ekulileni ngokukhothama kweSilo saMabandla wonke, iNkosi Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu.”
AmaZulu, ngomlomo womphathi wawo omusha uSandile Zungu, abonge iSilo ngokuwabusisa kwaso ekuqaleni kwesizini.
“Kulesi sikhathi esibuhlungu, uZungu ufisa ukudlulisa amazwi enduduzo asuka ekujuleni kwenhliziyo emele nomndeni waMaZulu FC emndenini wasebuKhosini bukaZulu, esizweni sikaZulu uhulumeni nabantu baseNingizimu Afrika yonkana.
“Muva nje iSilo sibusise uZungu ngokuthenga kwakhe AmaZulu FC okuyinto enhle kakhulu. Yingakho ukujika kwezinto eqenjini sikubonga kuso iSilo bezibusiso zaso,” kusho isitatimende seqembu.
NeMpempe idlulisa okwayo ukulila esizweni sonke samaZulu ngalo mshophi. Iphumule iNgonyama!
Previous Previous post: IChiefs seyiqalile ukuhlanza indlu – uNtshangase owokuqala ukuhamba
Next Next post: Ifuna ukudlula ngehubo kwiStellies iDowns